C/risaaq Cumar "Waddooyinka Magaalada ee dhagxaanta Lagu Goynayo Amniga Caasimadda laguma sugi karo".
Monday July 09, 2018 - 17:16:02 in Wararka by Super Admin
Siyaasiyiin horay xilal ugasoo qabtay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo aqoonyahanno ayaa ka hadlay weerarkii aadka u xooganaa ee maalmo ka hor dhacay bartamaha magaalada Muqdisho.
Cabdi Risaaq Cumar Maxamed wasiirkii hore ee ammaanka dowladda Federaalka ayaa sheegay in weerarkii Al Shabaab ka fuliyeen meel ku dhow madaxtooyada Villa Somalia uu banaanka soo dhigayo fashilka heysta xukuumadda Kheyre.
Wuxuu carabaabay in waddooyinka oo dhagaxaan lagu gooyo iyo shacabka oo lakadeeyo aysan waxba kusoo kordhin amniga magaalada isagoo talooyin ujeediyay Farmaajo iyo Kheyre.
"Runtii waxay tani cadeyneysa in jid la xiro in aan wax macno ah laheyn iyo dadka isku socodkooda la adkeeyo, maadaama jidad la xiro aysan wax badan keeneyn, meelaha dhibka ka jira iyo dul duleelada waa ciidanka dhexdiisa”ayuu yiri Wasiirkii hore ee Amnig.
wuxuu soo hadal qaaday habacsanaanta ka muuqato laamaha ammaanka DF-ka isagoo si gaar ah u eedeeyay wasaaradaha amniga ka shaqeeya, weerarkii lagu qaaday wasaaradaha arrimaha gudaha iyo taliska Booliska ayuu ku sifeeyay mid banaanka soo dhigaya fashilka jira.
"Dhibaatada Soomaalida heysata waxba dhacaya lama baarayo, lagamana daba tagayo, qof kasta in Mas’uuliyadiisa in la saaro loo baahan yahay, intaas meel ayay soo mareen in meesha amniga halbowlaha aheyd in la weeraro waa in cid mas’uuliyadeeda qaadataa, waxaa aaminsahay in baaritaan la sameeyo oo aan laga aamusin”ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegtay in askar iyo saraakiil badan ay ku dishay weerarkii lagu qaaday xarunta wasaaradaha iyo Taliska Booliska oo ka dhacday meel ammaankeeda si aad ah loo ilaaliyo.